Crow's Foot Tack - အဆိုပါ Tailoress
ဇူလိုင်လ 26, 2017 | No Comments | Stitches, Tailor's Stitches
အဆိုပါကျီးကန်း၏ခြေမှိုအဆင်တူသည် arrowhead မှို. လိုအပ်တဲ့အရပျ၌သေးငယ်တဲ့တြိဂံ marking ခြင်းဖြင့်အစပြုပါ. ထိုတြိဂံရဲ့အောက်ခြေဘက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်ကနေတဆင့်မှားယွင်းတဲ့ဘက်ခြမ်းကနေဆေးထိုးအပ်ကိုတက်စေ. ထိပ်အမှတ်အားဖြင့်ဘယ်ဘက်လက်ျာဘက်ကနေတစ်ထောင့်ဖြတ်ချုပ် ယူ., ထို့နောက်ဘယ်ဖက်မှာထပ်ညာဘက်အောက်ထောင့်၌ဤပြန်လုပ်နှင့်. ထိုတြိဂံလုံးဝအတွက်ပြည့်စုံသည်အထိဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လုပ်.
အဆိုပါဂျာစီပြင်သစ် Knickers PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာများအတွက်နယူးဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ